खाली पेटमा दूध चिया पिउदा हुन सक्ने नोक्सान आज : २०७४ असार १४ बुधबार / 28th June, 2017
खाली पेटमा दूध चिया पिउदा हुन सक्ने नोक्सान
२०७३ पौष २३ शनिबार ०८:०५:०२
प्रकाशित ३३०६८ पटक पढिएको
चिया धेरै नेपालीले पिउने पेय पदार्थमा पर्छ । बिहान ओछ्यानमै चिया पिउने त नेपालीको चलन नै बनेको छ । कतिपय त चिया नपिई नित्यकर्म गर्न सक्दैनन् । अधिकांश नेपालीले बिहान चिया पिउछन् । के बिहान खाली पेटमा चिया पिउनु राम्रो बानी हो ? बिभिन्न अनुसन्धानले खाली पेटमा चिया पिउदा स्वास्थ्यलाई धेरै हानी हुनसक्ने देखाएका छन् । चियामा कैफिन र टैनिन पाइन्छ जसले शरीरलाई उर्जा दिन्छ । चियामा दूध मिसाउदा चियामा पाइने एण्टिअक्सिडेन्ट नष्ट हुन्छ ।
खाली पेटमा दूध चिया पिउदा थकान बढ्ने, एसिडिटी बढ्ने हुन्छ । यसले पेटको अल्सर पनि हुनसक्छ ।
दिनमा ५ कप भन्दा बढी चिया पिउने मानिसलाई प्रोस्टेट क्यान्सर हुनसक्ने बिभिन्न अध्ययनहरुले दखाएका छन् ।
‘धेरै तातो चिया पिउने मानिसमा मनतातो चिया पिउने मानिसको तुलनामा क्यान्सरको खतरा आठ गुणाबढी हुन्छ’ अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यो अध्ययन ५० हजार मानिसमा गरिएको थियो । तातो चियाले घाँटीमा रहेका नरम तन्तुहरुलाई क्षति गर्छ ।
विशेषज्ञ डाक्टर भर्ना प्रकरणः मेरिटका आधारमा तोकिएको शुल्कमा भर्ना लिन सर्वोच्चको आदेश
स्थानीय चुनावमा मतदान गर्न स्ट्रेचरमा
भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल पुगिन् मनिषा कोइराला, एक लाख सहयोग प्रदान (फोटो फिचर)
पोखरामा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर
यस्तो बन्दै छ १० अर्ब लागनीमा महतोको मेडिसिटी अस्पताल, ५ वर्षमा थप १० अस्पताल बनाउँदै
मतदानमा लाइन लागेकै अवस्थामा दुई वृद्धको निधन
पिजी भर्नामा मेरिटका विद्यार्थीको पक्षमा दुई चर्चित अधिवक्ता
तीन डाक्टर १२औं तहमा बढुवा ७.
योग अभ्यास गर्नुअघि जान्नुपर्ने १५ कुरा
जुम्ल्याहा सन्तानका दुई बेग्लाबेग्लै बुवा, वैज्ञानिक कारण यस्तो छ
जन्डिस निको पार्ने 'ग्यारेन्टीवाला'ले कसरी पुर्‍याउँदैछन् मृत्युको मुखमा...